Abacebisi abatsha beMedia-uPhando, uLuntu, iVidiyo kunye neMfono
Abaqhubi beNtengiso… baphambukile .. Abacebisi
NgoMgqibelo, Julayi 3, 2010 Lwesine, Okthobha 29, 2020 Douglas Karr
Ukuqala kwam DK New Media, Esinye sezigqibo ekufuneka sizenzile yayiyindlela yokufaka uphawu kwinkampani. Njengoko ndicinga ngentengiso kunye nokuvela kwayo, ndihlala ndiyithelekisa nomqhubi kunye ne symphony. Njengomcebisi, kufuneka ndifane nomqhubi, ndincedise ukudibanisa iindlela ezahlukeneyo kunye nokuzisebenzisa ukuze ndibethe amanqaku afanelekileyo ngamaxesha afanelekileyo, ukuze isicwangciso sifezekiswe ngokupheleleyo.
Bendingafuni ubudala ngokwam ngokuzithiya njenge umcebisi wentengiso. Bendingafuni ukuzikhawulela ngokuzibiza a Umcebisi wophendlo or umcebisi kwimidiya yoluntu. Oko kufana nokuxela ukuba ungumdlali wevayolin, iflautist, okanye ugqogqo. Endaweni yoko, bendifuna ukuziphawula ngokucacileyo.
Imithombo yeendaba entsha ayithethi ukuba ndiyayityeshela imithombo yeendaba yakudala, kwaye ayindilinganisi nakwixesha elizayo. Kuya kuhlala kukho into ethile entsha. Ukubonisana namajelo eendaba amatsha kunokubandakanya ukukhangela, ezentlalo, ividiyo, iselfowuni… okanye nantoni na eyehla kumbhobho. Oko akuthethi ukuba ndiza kuzazisa njengengcali kuzo zonke ezo arene. Sele ndisebenza namafemu amaqabane kunye neearhente ezizodwa kwezi zihloko.
Njengomcebisi weendaba omtsha, ibeka ulindelo endinokunceda ngalo ikhona imithombo yeendaba… kwaye ndifundisa abathengi bam ngezinto ezenzekileyo kutshanje kunxibelelwano lweendaba. Kwaye ndiyazama ukufunda malunga nokwakha ubuchule kuzo zonke iindlela ezintsha. Amaxesha ngamaxesha, ndiyaxela ukuba mna do Ukubonisana namajelo eendaba ezentlalo okanye ukubonisana nokukhangela… kodwa andizibonakalisi kuphela kwezo ndawo.
Abaqhubi ababalulekanga njengeengcali kwiimvumi nakwesiphi na isixhobo; Nangona kunjalo, bayayiqonda ngokupheleleyo indlela yokusebenzisa isixhobo ngasinye, babenze basebenze kunye, kwaye benze umculo omnandi. Yi le intengiso yeokhestra.
Kubi kakhulu ukuba asizibizi ngokuba ngabaqhubi beentengiso!
Nanku ukwenza umculo omnandi wentengiso!
tags: balanceumqhubiumcebisi wentengisoUkudibana nentengisointengiso yeokhestraumculoizixhobo zomculo